WhyNotWin11: Ngwa iji gosipụta ma ọ bụrụ na PC anyị dabara maka Windows 11 | Site na Linux
WhyNotWin11: App iji gosipụta ma ọ bụrụ na PC anyị dabara maka Windows 11
Ma anyi bu ndi oru GNU / Linux Sistemụ arụmọrụ iji otu kọmputa ma ọ bụ karịa nọrọ na njikere Ugboro abụọ Booting con Windows 7 ma ọ bụ Windows 10, ma ọ bụ n'ihi na anyị nwere ezinụlọ, ndị enyi ma ọ bụ ndị ahịa naanị Windows, Ọ dị mma ịmara nke ngwa nwere ike ịkwado ọrụ nke nyocha nke kọmputa dị mma ma ọ bụ na ọ bụghị, na ihe kpatara kpatara, maka ikwaghari nye ohuru Windows 11.
N'ezie, Microsoft O nwere ngwa ọrụ nke ya n'efu, mana ụlọ nke aka ya anaghị adị mma mgbe niile. Ma ọ bụrụ na anyị nwere ike iji free ma ọ bụ oghe ngwaọrụ maka nke a na ọrụ ọ bụla ọzọ, gaa n'ihu Windows, MacOS ma ọ bụ GNU / Linux nke ọma ọbụna mma. Na nke ahụ bụ kpomkwem ihe banyere ngwa akpọrọ "Gịnị mereNotWin11".
Dị ka ọtụtụ ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ maraworị, ọtụtụ n'ime ihe gbasara Windows 11 nwere njikọ na amanyere bụ iwu nke ọdịdị nke kọmputa na Teknụzụ TPM. Maka nke a na ndị ọzọ, ọ dị mkpa iji ngwa ndị na-enye nkọwa ndị ọzọ, dị ka "Gịnị mereNotWin11".
Ya mere, maka ndị chọrọ ịmatakwu banyere Teknụzụ TPM anyị ga-ahapụ gị ozugbo n'okpuru, akwụkwọ anyị gara aga metụtara isiokwu a na ndị ọzọ metụtara nyocha nke ngwa ndị yiri ya, ya bụ, nke oghe oghe maka Windows:
"TPM (Module Ntụkwasị Obi) bụ mgbawa kọmputa (microcontroller) nke nwere ike ịchekwa ihe nrụpụta ejiri iji gosipụta ikpo okwu (PC ma ọ bụ laptọọpụ gị). Ihe ndị a nwere ike ịgụnye okwuntughe, asambodo, ma ọ bụ igodo nzuzo." TPM: Ihe ntakịrị banyere ihe niile gbasara Modul Tụkwasịrị Obi. Na iji ya na Linux!
ShareX: Mepee Isi mmalite App maka Nseta ihuenyo na Windows
1 WhyNotWin11: Mepee Isi mmalite
1.1 Gịnị bụ WhyNotWin11?
1.3 Ozi bara uru karị
1.3.2 Ntinye na iji
1.3.3 Ihuenyo gbaa
WhyNotWin11: Mepee Isi mmalite
Gịnị bụ WhyNotWin11?
Dị ka Onye Mmepụta ya GitHub gọọmentị saịtị, "Gịnị mereNotWin11" A kọwara ya n'ụzọ dị nkenke:
"Ọ bụ nchọpụta nchọpụta iji nyere aka ịmata ihe kpatara PC gị adịghị njikere maka ụdị Windows 11."
Ọ bụ "Gịnị mereNotWin11" bụ ihe ngwanrọ mepere emepe (ngwa) nke na-enye anyị ohere ịlele ma kọmputa anyị (desktọọpụ ma ọ bụ laptọọpụ) nwere ike ịgba Windows 11 ma ọ bụ. Na ihe dị iche, n'ihe gbasara Ngwaọrụ Microsoft Health Check (Nyocha Ahụike PC), nke na-enye ozi ziri ezi banyere ihe kpatara kọmputa nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ Windows 11.
Maka nke a, ọ na-enyocha akụrụngwa wee gwa anyị gịnị kpatara na anaghị akwado Windows 11,, na-enye anyị ndepụta nke ngwaike sistemụ niile ebe enwere nsogbu.
N'etiti atụmatụ ndị a ma ama nke "Gịnị mereNotWin11", nke na-eme ka ọ dị mma karịa Microsoft mbụ, anyị nwere ike ikwu ihe ndị a:
Njirimara Onye Ntuzi Eserese (GUI) ka mma.
Lelee niile ndakọrịta chọrọ na-egosi na ọ bụrụ na kọmputa gị osobo ha.
Gosi nsonaazụ ya na agba. Bụ agba akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ maka "ee", agba uhie maka "mba", na agba odo maka "ejighị n'aka".
Nyocha maka ngwaike ngwaike na mpaghara niile, gụnyere ụdị CPU, ụdị TPM, ego RAM, na BIOS, tinyere ihe ndị ọzọ.
Cheta na: Mgbe kọmputa complies na kasị ngwaike dakọtara na Windows 11, yikarịrị ka ọ ga-ekwe ka ntinye otu ihe ahụ na ya. Otú ọ dị, "Gịnị mereNotWin11" ọ ga - enyere ọtụtụ aka idozi nkọwapụta ngwaike achọpụtara, nke anaghị akwado.
Ozi bara uru karị
Maka ibudata, ị nwere ike ịnweta ihe ndị a njikọ na budata onye ulo oru ohuru ohuru nke di na Ọkpụkpọ ".exe". Ọ na-aga ugbu a maka nke ya ụlọ mbipute nọmba 2.3.0.5, nke ewepụtara ụbọchị ole na ole gara aga.
Ozugbo ebudatara ihe nrụnye, na m ezigbo ojiji, dị nnọọ na-agba ọsọ na-eji ngwa na-eche ka ọ mara ruo mgbe gị niile interface ntọala na-n'ụzọ zuru ezu emelitere.
Nke a bụ nsonaazụ nke iji "Gịnị mereNotWin11" na kọmputa m. Kedu na nkenke, ikekwe adabaghị ịkwaga Windows 11.
Agbanyeghị, na nke m, achọghị m ịma ma ọlị, ebe ọ bụ na 99% nke oge m na kọmputa m na-etinye nke ọma GNU / Linux, na-eji ma na-etolite nke m MX Linux 19 ọrụ akpọ Ọrụ ebube. Ọzọkwa, kọmputa m nwere arụmọrụ dị elu karịa n'ụzọ ọ bụla GNU / Linux ya na Windows 10.
Ya mere: "Windows 11 anaghị akwa uwe ị gaghị aga".
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere nke a na-akpali emeghe ngwa oku «WhyNotWin11», nke na-ezube kwado ngwaike na ngwanrọ nke kọmputa anyị iji mara ma ọ dị mma ma ọ bụ na enweghị ike ịwụnye Windows 11; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » WhyNotWin11: App iji gosipụta ma ọ bụrụ na PC anyị dabara maka Windows 11
Emeelarịrị Ultimaker Cura 4.10 ma ndị a bụ akụkọ ya
GitHub Copilot, onye inyeaka ọgụgụ isi maka koodu ide